Part 1: Gịnị ọzọ na ndị ọzọ ndị mmadụ ịgbanwee si iOS ka Samsung
Part 2. Otu click ka ịgbanwee si iPhone ka Samsung igwe
Part 3. Nghoputa: Ị bụ onye iPhone onye ọrụ ma ọ bụ a Samsung ọrụ?
Na nkịtị mmadụ na udo nke ohere ọhụrụ technology, agụụ maka na-ọzọ na ndị ọzọ dị ike ngwaọrụ e amụba ukwu. Otu ihe atụ bụ na-adịbeghị anya na-abawanye na-emekarị nke shifting si iOS ka Samsung imeputa. Ọzọ na ndị ọzọ ndị mmadụ na e Ditching ha iPhones maka Samsung ngwaọrụ n'oge na-adịbeghị. Ihe kpatara ya? Ọfọn, e nwere ihe bụghị nanị otu. Kama nke ahụ, e nwere ihe a dum ndepụta nke ihe ndị mere na emewo ka ọbụna ihe ndị kasị eguzosi ike n'ihe iOS akwado na-ahapụ ya ihe ọma na ibugharịa na Samsung ngwaọrụ.
Mgbe ọ na-n'ezie-abịa ala ya, ndị mmadụ n'oge chọrọ ihe kasị mma maka ego ha na-emefu ego. Site na ihuenyo size na igwefoto mkpebi na-ngwaike ike, ihe niile Nwela enyocha critically. Nke a bụ tumadi n'ihi na Internet nyere ọbụna ihe ndị kasị novice ndị niile ozi dị ha mkpa iji na-ekpebi nke ngwaọrụ bụ n'ezie ruru ego ha. Ka ise a ngwa ngwa tụnyere n'etiti abụọ ịghọta ka mma, nnofega ke ọrụ nhọrọ.
Redundancy na atụmatụ. N'otu ahụ imewe, yiri ihuenyo mkpebi New atụmatụ na bụla ngwaọrụ. Enwekwukwa na bụla update
Ọ dịghị NFC NFC ndị dị ọbụna ala ọnụ nkeji
Ọ dịghị ịrịba mma na igwefoto pikselụ. Ndị ọhụrụ iPhone 6 atụmatụ a mere 8 MP igwefoto. Ọzọ na ndị ọzọ igwefoto pikselụ na bụla ngwaọrụ ọhụrụ. Ndị ọhụrụ Samsung S6 obụrede mbụre a 16 MP igwefoto
Redundancy na ihuenyo size. Tupu iPhone 6, niile iPhones e featuring a 4 anụ ọhịa ihuenyo. iPhone 6 Otú ọ dị, nwere a 4.7 sentimita asatọ ihuenyo na ọhụrụ iPhone 6 gbakwunyere na-abịa na a nnukwu 5.5 sentimita asatọ ihuenyo Samsung e àjà ya ọrụ mgbanwe ihuenyo nha site na mmalite on. Malite na S3 na-apụta a 4.8 sentimita asatọ ngosi, ndị ọhụrụ Samsung ekwentị, S6 nwere a 5.1 sentimita asatọ ihuenyo
Apple kemgbe n'ezie ngwa ngwa banyere ndị 3G na LTE assimilation na ya ngwaọrụ Samsung apụta 3G a afọ tupu Apple mere na N'otu aka ahụ bụ ngwa na-enye LTE nkwado na ya ngwaọrụ
Ọ bụrụ na ị nwekwara otu onye nke ndị na-Switched si iPhone ka Android karịa gị n'ezie ga nwere dum ọtụtụ nke data nọ ná mkpa ga-agafere. Ị adịghị mkpa-echegbu onwe, Otú ọ dị, n'ihi na Wondershare MobileTrans na-eme ka usoro dị mfe. Ọ bụ a software na-enye gị nyefee gị niile data site na otu ngwaọrụ ọzọ na-efu nke otu click. Ị adịghị mkpa na-aga site niile na ntuziaka oru nke na-eke backups na ọdụ site gị na laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa maka ụbọchị dum na-ahọpụta onye faịlụ. MobileTrans Na-elekọta ihe niile maka gị.
Ebe na-ekwu banyere ihe Wondershare MobileTrans nwere na-enye, ka anyị hụ otú ọ n'ezie na-arụ ọrụ. Iji malite ebufe gị data iji Wondershare MobileTrans, na-eso ndị a dị mfe nzọụkwụ:
Download Wondershare MobileTrans n'elu ma wụnye ya na gị na laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa. Nwụnye usoro ejikari dịghị ewe oge iji wuchaa otú eleghị anya ị na-agaghị na-eche ukwuu.
Mgbe ọ gụchara nwụnye usoro, na-agba MobileTrans na gị laptọọpụ / kọmputa. Jikọọ ma ngwaọrụ gị, na iPhone na Samsung mobile gị laptọọpụ / kọmputa site na eriri cables.
Dị ka a kọwara na mbụ, Wondershare MobileTrans eme ọtụtụ n'ime ọrụ gị maka unu; ọ na-adịghị achọ iji aka hazi gị na ngwaọrụ. Chere maka Wondershare MobileTrans ịchọpụta ngwaọrụ-akpaghị aka. Nwee ndidi ma ọ bụrụ na oge mbụ initialization na-ewe obere oge dị ka usoro ihe omume kwesịrị iji wụnye ụfọdụ chọrọ ọkwọ ụgbọala mgbe eji a ngwaọrụ nke oge mbụ.
Mgbe nchọpụta nke ma ngwaọrụ, ị ga-ahụ a na ihuenyo yiri ndị na-esonụ. Ị ga-achọpụta ya na-egosi ma nke ngwaọrụ aka. Ọzọkwa achọpụta na "tụgharịa" button na ike ga-eji ịgbanwe Isi Iyi na Destination ngwaọrụ a mere click. The menu na etiti na-egosi na faịlụ ndị a ga-depụtaghachiri ka ebe ngwaọrụ.
Họrọ niile data na ị chọrọ nyefee gị iPhone gị Samsung site ịlele ahụ kwekọrọ ekwekọ igbe chọrọ data nhọrọ. Pịa "Malite Copy" Ozugbo ị na-mere-ahọpụta.
A na-enwe ọganihu mmanya ga-apụta na-egosi na ọganihu nke dechara ọganihu pasent. Ọ ga-egosi na ọnọdụ nke onye data enyefe. Ndị nke a gaara kpọfere ga-a "Ịga nke Ọma" e dere megide ha. Chere maka ọganihu mmanya iru 100%.
Ozugbo ebufe usoro bụ zuru ezu, ị nwere ike ikwụpu gị ntị si gị na laptọọpụ / kọmputa ma malite iji ọhụrụ gị Samsung ngwaọrụ gị nile gara aga data ama kpọfere ya.
Ka anyị hụ otú ọtụtụ n'ime ị ka na-eguzosi ike n'ihe gị iPhones. Votu n'okpuru iji họrọ ugbu a na ngwaọrụ na ị na-eji na ka ahụ na-atọ na nke a agha nke cell-igwe featuring mbepụ technology!
Nhọrọ 1. iPhone
Nhọrọ 2. Samsung
Nhọrọ 3. Ma
Top 4 Ụzọ nyefee Music ka iOS 9 Apple Devices
> Resource> iOS> Otu Pịa ịgbanwee si iOS ka Samsung